ပိတ်ရက် မှာ ပုဂံ ဘုရားဖူးသွားချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် ပုဂံမှာ ပိတ်ထားတဲ့ ဘုရားတွေ နဲ့ .. သွားလို့ ရသေးတဲ့ ဘုရားတွေ – Let Pan Daily
ပုဂံမှာ ဘယ်ဘုရားတွေ ပိတ်တာလဲဆိုတော့ ဒီဘုရားတွေပဲ ပိတ်တာပါ…
ထီးလိုမင်းလိူဘုရား၊ မနူဟာ ဘုရား၊ မြစေတီ ဘုရား၊ ရွှေဆံတော် ဘုရား၊ ဓမ္မရံကြီးဘုရား၊ သဗ္ဗညု ဘုရား၊ အာနန္ဒာဘုရား၊ ကန်တော့ပလ္လင်၊ ပြဿဒါကြီး ဘုရား၊ စူဠာမူနိ ဘုရား၊ မဟာဗောဓိ ဘုရား၊ အလိုတော်ပြည့် ဘုရား၊ ရွှေစည်းဂုံ ဘုရား၊ ဓမ္မရာဇက ဘုရား၊ ငှက်ပစ်တောင် ဘုရား၊ လောကနန္ဒာ ဘရား၊ မနူဟာ ဘုရား၊ ဗူးဘုရား၊
တခြားဘယ်နေရာတွေသွား လို့ရသေးလဲဆိုတော့ ဧရာဝတီ မြစ်ဘေးက >
ကျောက်မျက်မှော်၊ ရွှေကွန်ချာ ၊ စိုးမင်းကြီးဘုရား၊ စိုးမင်းကြီး အုပ်ကျောင်း၊ အပယ်ရတနာ ဘုရား၊ နဂါးရုံ ဘုရား၊ စေတနာကြီး ဘုရား၊ ဝက်ကြီးအင်း ဂူပြောက်ကြီး၊ မြင်းကပါ ဂူပြောက်ကြီး၊ ဂူပြောက်ငယ်၊ ရွှေဂူကြီး ဘုရား၊ နန်းဘုရား၊ ဆူးလေကုန်၊ နွားပြဂူ ဘုရား၊ မြင်းပြဂူ ဘုရား၊ တဝဂူ ဘုရား၊ ဆူးလေကုန်း ဘုရား၊ ရွာဟောင်ကြီး ဘုရား၊ ရင်မနားကုန် ဘုရား၊ မျက်တော်ပြေ ဘုရား၊ ခေမင်္ဂ ဘုရားစု၊ မြေပုံသာ ဘုရားစု၊ ရွှေနန်းရင်တော် ဘုရာစု၊ နတ်လျောကျောင်း၊ ပုထိုးသားများ ဘုရား၊ မီးညိမ်းကုန် ဘုရား၊ မီးမလောင်ကျောင်းဘုရား၊ သိကြားပုန်း ဘုရား၊ ဆင်များရှင်ဘုရား၊ ဗိုလ်ချိုမိ ဘုရား၊ လောကထိပ်ပန် ဘုရား၊ မင်းနန်သူဘုရားသုံးဆူ၊ သံတော်ကြား ဘုရား၊ သမ္ဘူလခေါ်သုံးလူလ ဘုရား မင်းနန်သူရွာ၊
နန္ဒာမညာခေါ် အနန္တပညာ ဘုရား မင်းနန်သူရွာ၊ ရှင်အဇ္ဇဂေါဏဘုရား၊ ဖွားစောအုတ်ကျောင်း၊ ကျောက်စကားကြီး ဘုရား၊ အရှေ့ဖက်လိပ် အနောက်ဖက်လိပ်၊ စိမ်းညက်ညီမ ဘုရား၊ ကျောင်းရင်း ညီမ ဘုရား၊ တိုက်ကြီးဘုရား၊ သမီးဝှက်ဥမင် – ငှက်ပစ်တောင်ဘုရားအရှေ့မြောက်ဘက်၊ ကျောက်ဂူဥမင်၊ ကုန်းတော်ကြီးဘုရား၊ သက်မုနိ ဘုရား၊ ရွှေသပိတ်ဘုရား၊ ဆေပဒ စေတီ၊ သက်တော်ဂူကျောင်း၊ ကျန်စစ်သားဥမင်၊ ဥပါလိသိမ်၊ တောင်ဘီရွာထိပ်မှ ရှေ့ဟောင်းကျောင်းတိုက်၊ ဗူးလယ်သီ ဘုရား၊ မင်းအိုချမ်းသာ၊ အတွင်းစည်းခုံ၊ အာနန္ဒာအုတ်ကျောင်း၊ ပိဋကတ်တိုက်၊ ငကျွဲနားတောင်း၊ ရှပင်သာလျောင်း၊ မင်္ဂလာစေတီ၊ သရပါဂိတ်၊ နတ်သမီးကမ်းပါး၊ာထန်းတဲ၊ တမာပင်တန်း ၊ Sunset ကုန်၊ ကဲဒါတောင် တခြား ဘုရားတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ် နော်
အပေါ်က ဘုရားတွေမှာလဲ စိတ်ဝင်စားစရာ သမိုင်းတွေ ရှိတယ် … နံရံဆေးရေး ပန်းချီတွေ လဲကောင်းတယ် လေ့လာလို့ရပါတယ်နော် .. လမ်းမသိရင် လမ်းပြခေါ်ပါ ဒီနေရာတွေက 45 တွေ ကားကြီးတွေ ဝင်လို့မရတဲ့ နေရာတွေမှာရှိနေတာမလို့ E-Bike TukTuk မြင်းလှည်းနဲ့ သွား ရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ် နော်
Local တွေသာ မရောက်တာ foreigner ကတော့ ဒီလိုနေရာတွေကိုအဓိက ထားပြီးလေ့လာကျတယ် … ပုဂံရောက်ရင် လက်ကိုတက်တူးပန်ချီးဆွဲပြီးအထင်ကရ ဘုရားတွေမှာပဲ Selfie ဆွဲမနေနဲ့အုံး ဒီလိုနေရာတွေကိုလဲ သွားလေ့လာပါလို့ တိုက်တွန်းခြင်ပါတယ် ……. နံရံဆေးပန်ချီ အင်္ဂတေပန်းတမော့ ကျောက်စာ အုပ်ခွက် စဥ့် ပုဂံခေတ် လက်ယာတွေ အများကြီးပါ ရှေ့ဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကို ပုဂံရောက်တုန်းကြည့်ပါလေ့လာပါ …သူများတာ ပြောတာ ကျွန်တော်လဲ ဒီဘုရားတွေ အကုန်မရောက်ဖူးဘူးဗျ လမ်းပြ လိုရင် ခေါ်လိုက်နော်
ပိတျရကျ မှာ ပုဂံ ဘုရားဖူးသှားခငျြတဲ့ သူတှေ အတှကျ ပုဂံမှာ ပိတျထားတဲ့ ဘုရားတှေ နဲ့ .. သှားလို့ ရသေးတဲ့ ဘုရားတှေ
ပုဂံမှာ ဘယျဘုရားတှေ ပိတျတာလဲဆိုတော့ ဒီဘုရားတှပေဲ ပိတျတာပါ…
ထီးလိုမငျးလိူဘုရား၊ မနူဟာ ဘုရား၊ မွစတေီ ဘုရား၊ ရှဆေံတျော ဘုရား၊ ဓမ်မရံကွီးဘုရား၊ သဗ်ဗညု ဘုရား၊ အာနန်ဒာဘုရား၊ ကနျတော့ပလ်လငျ၊ ပွဿဒါကွီး ဘုရား၊ စူဠာမူနိ ဘုရား၊ မဟာဗောဓိ ဘုရား၊ အလိုတျောပွညျ့ ဘုရား၊ ရှစေညျးဂုံ ဘုရား၊ ဓမ်မရာဇက ဘုရား၊ ငှကျပဈတောငျ ဘုရား၊ လောကနန်ဒာ ဘရား၊ မနူဟာ ဘုရား၊ ဗူးဘုရား၊
တခွားဘယျနရောတှသှေား လို့ရသေးလဲဆိုတော့ ဧရာဝတီ မွဈဘေးက >
ကြောကျမကျြမှျော၊ ရှကှေနျခြာ ၊ စိုးမငျးကွီးဘုရား၊ စိုးမငျးကွီး အုပျကြောငျး၊ အပယျရတနာ ဘုရား၊ နဂါးရုံ ဘုရား၊ စတေနာကွီး ဘုရား၊ ဝကျကွီးအငျး ဂူပွောကျကွီး၊ မွငျးကပါ ဂူပွောကျကွီး၊ ဂူပွောကျငယျ၊ ရှဂေူကွီး ဘုရား၊ နနျးဘုရား၊ ဆူးလကေုနျ၊ နှားပွဂူ ဘုရား၊ မွငျးပွဂူ ဘုရား၊ တဝဂူ ဘုရား၊ ဆူးလကေုနျး ဘုရား၊ ရှာဟောငျကွီး ဘုရား၊ ရငျမနားကုနျ ဘုရား၊ မကျြတျောပွေ ဘုရား၊ ခမေင်ျဂ ဘုရားစု၊ မွပေုံသာ ဘုရားစု၊ ရှနေနျးရငျတျော ဘုရာစု၊ နတျလြောကြောငျး၊ ပုထိုးသားမြား ဘုရား၊ မီးညိမျးကုနျ ဘုရား၊ မီးမလောငျကြောငျးဘုရား၊ သိကွားပုနျး ဘုရား၊ ဆငျမြားရှငျဘုရား၊ ဗိုလျခြိုမိ ဘုရား၊ လောကထိပျပနျ ဘုရား၊ မငျးနနျသူဘုရားသုံးဆူ၊ သံတျောကွား ဘုရား၊ သမ်ဘူလချေါသုံးလူလ ဘုရား မငျးနနျသူရှာ၊
နန်ဒာမညာချေါ အနန်တပညာ ဘုရား မငျးနနျသူရှာ၊ ရှငျအဇ်ဇဂေါဏဘုရား၊ ဖှားစောအုတျကြောငျး၊ ကြောကျစကားကွီး ဘုရား၊ အရှဖေ့ကျလိပျ အနောကျဖကျလိပျ၊ စိမျးညကျညီမ ဘုရား၊ ကြောငျးရငျး ညီမ ဘုရား၊ တိုကျကွီးဘုရား၊ သမီးဝှကျဥမငျ – ငှကျပဈတောငျဘုရားအရှမွေ့ောကျဘကျ၊ ကြောကျဂူဥမငျ၊ ကုနျးတျောကွီးဘုရား၊ သကျမုနိ ဘုရား၊ ရှသေပိတျဘုရား၊ ဆပေဒ စတေီ၊ သကျတျောဂူကြောငျး၊ ကနျြစဈသားဥမငျ၊ ဥပါလိသိမျ၊ တောငျဘီရှာထိပျမှ ရှဟေ့ောငျးကြောငျးတိုကျ၊ ဗူးလယျသီ ဘုရား၊ မငျးအိုခမျြးသာ၊ အတှငျးစညျးခုံ၊ အာနန်ဒာအုတျကြောငျး၊ ပိဋကတျတိုကျ၊ ငကြှဲနားတောငျး၊ ရှပငျသာလြောငျး၊ မင်ျဂလာစတေီ၊ သရပါဂိတျ၊ နတျသမီးကမျးပါး၊ာထနျးတဲ၊ တမာပငျတနျး ၊ Sunset ကုနျ၊ ကဲဒါတောငျ တခွား ဘုရားတှအေမြားကွီးကနျြပါသေးတယျ နျော
အပျေါက ဘုရားတှမှောလဲ စိတျဝငျစားစရာ သမိုငျးတှေ ရှိတယျ … နံရံဆေးရေး ပနျးခြီတှေ လဲကောငျးတယျ လလေ့ာလို့ရပါတယျနျော .. လမျးမသိရငျ လမျးပွချေါပါ ဒီနရောတှကေ 45 တှေ ကားကွီးတှေ ဝငျလို့မရတဲ့ နရောတှမှောရှိနတောမလို့ E-Bike TukTuk မွငျးလှညျးနဲ့ သှား ရငျ ပိုအဆငျပွပေါတယျ နျော
Local တှသော မရောကျတာ foreigner ကတော့ ဒီလိုနရောတှကေိုအဓိက ထားပွီးလလေ့ာကတြယျ … ပုဂံရောကျရငျ လကျကိုတကျတူးပနျခြီးဆှဲပွီးအထငျကရ ဘုရားတှမှောပဲ Selfie ဆှဲမနနေဲ့အုံး ဒီလိုနရောတှကေိုလဲ သှားလလေ့ာပါလို့ တိုကျတှနျးခွငျပါတယျ ……. နံရံဆေးပနျခြီ အင်ျဂတပေနျးတမော့ ကြောကျစာ အုပျခှကျ စဉျ့ ပုဂံခတျေ လကျယာတှေ အမြားကွီးပါ ရှဟေ့ောငျးအမှအေနှဈတှကေို ပုဂံရောကျတုနျးကွညျ့ပါလလေ့ာပါ …သူမြားတာ ပွောတာ ကြှနျတျောလဲ ဒီဘုရားတှေ အကုနျမရောကျဖူးဘူးဗြ လမျးပွ လိုရငျ ချေါလိုကျနျော
ခံတှငျး သနျ့စငျဆေးရညျက ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကို စက်ကနျ့ (၃၀) အတှငျး သစေနေိုငျကွောငျး လလေ့ာတှရှေိ့
အင်းတော် တွင် ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာ (၆၇) ချက်ဖြင့် ညီအမ (၂) ဦး ခြုံပုတ် အတွင်း ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရ